Lalana tapaka manerana ny Nosy : Harenina haingana -
AccueilSongandinaLalana tapaka manerana ny Nosy : Harenina haingana
Lalana tapaka manerana ny Nosy : Harenina haingana
12/01/2018 admintriatra Songandina 0
Betsaka ireo lalam-pirenena no potika sy rava vokatry ny fandalovan’ny rivodoza AVA farany teo. Vokatr’izany dia tapaka ny lalana ka miteraka fahatapahan’ny fifamoivoizana. Vantany vao niseho io tranga io dia nandray ny fepetra sy andraikitra mifanandrify amin’izay avy hatrany ny fitondram-panjakana amin’ny alalan’ny minisiteran’ny Asa vaventy, amin’ny famerenana haingana ny fifamoivoizana. Misy ny asa maika atao hanohizana ny lalana tapaka, anisan’izany ny tetezana any Vohiposa, any amin’ny lalam-pirenena RN7 izay lasan’ny rivodoza AVA. Fantatra fa efa afaka ampiasaina ny lalana, ary tombanana rahampitso sabotsy 13 janoary no hisokatra izany lalana izany. Araka ny fampitam-baovao voaray, dia efa tonga any an-toerana ireo fitaovana handrafetana ny tetezana, ary efa manomboka manaraka izany ihany koa ny asa fanamboarana. Nidina tany an-toerana nijery ifotony ny asa fanamboarana ny tompon’andraiki-panjakana avy any amin’ny faritra Matsiatra Ambony, notarihin’ Andriatsimba Jeremy, talem-paritra ny Fianarantsoa. Fa mialohan’ny hahavitan’ity tetezana ity tanteraka anefa, nisy ny sambo haingam-pandeha miisa 2 natolotra ny fitondram-panjakana nentina nanalana fahasahiranana ireo mpandeha, izay maimaim-poana ary maraina hatramin’ny maizina ny andro no ampiasana azy. Noraisina an-tanana ihany koa ny sakafon’ireo mpandeha tena sahirana.
Mifanohitra amin’izay kosa, tapaka tanteraka ny tetezana any Andranovorivato, 30 km miala ny Fianarantsoa, izay mbola ao anatin’ny lalam-pirenena RN7 ihany, mampitohy an’i Fianarantsoa sy Toliara, vokatry ny fandalovan’ny andro ratsy iny hatrany. Araka ny vaovao voaray hatrany, dia hatramin’ny fiara madinika tsy mahazo mifamezivezy intsony amin’io tetezana io. Efa nanomboka ny 8 janoary lasa teo no voalaza fa efa nisy olana ity tetezana ity ary fiara vaventy maro no mikatso ao an-toerana. Nidina tany an-toerana ireo tompon’andraikitry ny faritra nijery ny vahaolana raisina ho an’ny mponina sy ny mpampiasa ny lalana. Fantatra fa hametrahana tetezana vonjimaika io toerana io, ary anio zoma antoandro vao tombanana handeha ny fiara madinika.
Betsaka tokoa amin’izao fotoana izao ireo mpanao pôlitika mpanohitra no mitsikera be fahatany mahakasika ny asa fampandrosoana ataon’ny fitondram-panjakana ankehitriny. Fitsikerana tsy mitondra mankaiza anefa satria tsy hita akory ny zavatra mivaingana ataon’izy ireo ho ...Tohiny
Firenena Rosianina : Nanamafy ny fiaraha-miasany amin’ny zandarimariam-pirenena